Indawo yasemaphandleni ephangaleleyo enokufikelela kwi-adventure
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAimee
Indlu esandula ukulungiswa kweli lizwe ukuze ibaleke ezolileyo, inkampu yokuzingela, okanye isiseko sekhaya esisembindini ukulungiselela uhambo olujikeleze iMaine elunxwemeni. Ungaphumla kweli khaya liphangaleleyo emva kokonwabela iindawo eziphantsi kwekhaya loManyano, kunye nesikhululo sikaloliwe kunye noluntu lwama-Amish, okanye iBelfast enamanzi ayo. Unokuthatha uhambo olude lweentsuku ukuya kwiindawo ezinjengeZibuko laseBoothbay, iCamden, iRockland, iBar Harbour, okanye iBangor. Okanye yonwabele nje indalo ekwidesika yangasemva kunye neendlela zehlathi ezikufutshane.
Le ndlu yindawo entle yokuxhoma bobabini kwindawo ethe cwaka okanye kwikampu esezantsi yokuhlola uninzi lwelizwe laseMaine. Sigcine ingaphakathi lilula kwaye licocekile ukuze ukwazi ukonwabela indawo engaxutywanga. Kukho amagumbi amabini okulala, ngalinye linxibelelana negumbi lalo lokuhlambela. Enye inomandlalo oyindlovukazi, enye ibhedi epheleleyo. Kukho kwakhona i-futon kwigumbi lokuhlala. Kukho iilinen ezininzi ezongezelelweyo kunye nemiqamelo. Sineencwadi, imidlalo, kunye nezinto zokudlala ezimbalwa ukuba uza nabantwana. Singabonelela nangomnye womsonto wethu ophuma kuboya beegusha zethu ukuba ungathanda ukunitha okanye ukukrwetsha! Siza kugcina ifriji kunye nesikhenkcisi kunye nezinye iimveliso zethu zasefama, kubandakanya amaqanda, itakane okanye inyama yehagu, kunye nepesto yam edumileyo. Ikhitshi ligcwele izitya, izinto zokupheka, kunye nezixhobo ezisisiseko. Idekhi yangasemva inika indawo entle yokuphumla. Kanye ngaphaya kweyadi engasemva, uhlaza luxhasa iindidi ngeendidi zeentaka, ngoko inxalenye enkulu yonyaka zicula kamnandi. Kukho indawo yokupaka eyaneleyo ngaphandle kwendlela.
Okuncanyathiselwe endlwini igaraji enkulu ebucala kwaye igcinwe itshixiwe. Isetyenziswa kuphela njengendawo yokugcina. Ukuba uhlala ixesha elide, ngaphezu kweentsuku ezintathu, kunokwenzeka ukuba sinokufuna ukungena egaraji ukuze sifumane izixhobo okanye izinto esizisebenzisela ukuhlala kunye nefama yethu. Asizukungena kulendlu uhlala kuyo kwaye siza kukwazisa kwangaphambili ukuba sizakuba segaraji ukuze ungamangali.
Indlu yethu ikwindlela entle ezolileyo. Kukho ummelwane omnye osentshona onokumbona. Bakwanawo namahashe. Akukho bamelwane babonakalayo emantla okanye empuma. Kukho nommelwane ngaphaya kwendlela eya emazantsi, kodwa imithi esecaleni kwendlela iyayahlula. Ungahamba ngendlela, kodwa ukuze ufike kuzo naziphi na iivenkile kuya kufuneka uqhube. IBrooks kunye noManyano zezona dolophu zikufutshane ezineevenkile ezinezinto ezibalulekileyo.
Sihlala iikhilomitha ezi-4.5 phantsi kwendlela kwaye sinokufumaneka ukuba siyafuneka. Siza kuzama ukudibana nawe, okanye kamsinya nje emva kokungena ukuze siqinisekise ukuba unayo into oyifunayo, kodwa ngaphandle kokuba ufuna okuthile kuthi, siya kukushiya wedwa.
Sihlala iikhilomitha ezi-4.5 phantsi kwendlela kwaye sinokufumaneka ukuba siyafuneka. Siza kuzama ukudibana nawe, okanye kamsinya nje emva kokungena ukuze siqinisekise ukuba unayo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Thorndike